Mgbanwe Rubber sooks, Rubber sooks, Industrial sooks - Zebung
Hebei Zebung Rubber Technology Co., Ltd. e guzobere na 2003 ma dị na mpaghara mmepe nke Jing County, Hebei Province, China. Na 2015, ZEBUNG wetara usoro 4 nke usoro VP nke Italian VP nke na-emepụta eriri mmiri, mụbaa nsị nke mmiri mmiri. Mgbe ihe karịrị afọ 17 gasịrị ngwa ngwa, ZEBUNG na-arụ ọrụ dị ka onye ndu teknụzụ. ZEBUNG 'debara aha isi obodo na-ebili 59 nde, mkpara n'elu 150 ọrụ, 10 nnyocha sayensị pesonel, 3 agadi injinia, ihe karịrị 120 tent nke mmepụta akụrụngwa.
Ngwaahịa niile enwetala BV ISO9001: asambodo asambodo mba ofesi 2015
Ọtụtụ afọ nke ọkachamara ahụmahụ, magburu onwe imewe larịị!
Advancedmụta elu ISO9001 2000 mba quality management usoro management!
Anyị na-anọgidesi ike n'àgwà nke ngwaahịa na-achịkwa nnọọ na-amị Filiks, mere ka imewe nke niile ụdị!
Ozi anyị kachasị ọhụrụ